मोदीको शरणमा प्रचण्ड : भने जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहियो ! – Khoj Dainik
मोदीको शरणमा प्रचण्ड : भने जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहियो !
January 7, 2021 January 7, 2021 adminLeaveaComment on मोदीको शरणमा प्रचण्ड : भने जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहियो !
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आफ्नो समूहका प्रथम अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी भएपनि आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाईदिन मोदीसँग गुहार मागेको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डले नेपालको अहिलेको अवस्थाबारे भारतीय पक्षसँग गोप्य सल्लाह गरेको बुझिएको छ । उनको त्यहाँ महाराष्ट्रका गभर्नर तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नजिक मानिने भगत सिंह कोसीयारीसँग गोप्य भेट गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्ना पछिल्ला धारणामा सरकार अप्ठेरोमा पार्नका लागि चुच्चे नक्शादेखि जमिन फिर्ता ल्याउने मुद्दा आफूले उठाएको कारण देखाउँदै, प्रचण्डलगायतको घेराबन्दीलाई उल्लेख गर्दै आएका छन्। के प्रचण्डले भारतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि निम्तो दिएका छन् त? उनको राजनीतिक पृष्ठभूमी र शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विन्दु १२ बुँदे सम्झौतालाई हेर्दा भारत परिचालित रहेको स्पष्ट देखिन सक्ने कतिपयको भनाई छ।
उनको त्यहाँ महाराष्ट्रका गभर्नर तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नजिक मानिने भगत सिंह कोसीयारीसँग भेट हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। कोसीयारी नेपाल मामिलाका जानकार पनि मानिन्छन्। गभर्नर हुनुअघि भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका कोसीयारीसँग प्रचण्डको बेलामौका कुराकानी हुने गरेको थियो भने सम्बन्ध पनि बलियो रहेको छ। कतिपयले भने भारतीय जनता पार्टीका प्रदेशस्तरका नेतासँग पनि उनको भेट हुने अनुमान गरेका छन्। स्रोत
अस्पतालको लापरबाहीले सुत्केरीको मृ,त्यु !
प्रधानसेनापति शर्माले गरे यस्तो घोषणा, देशभरका सैनिकहरुमा छायो खुसीयाली ! ‘यस्तो जटिल परिस्थितिमा समेत संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नका लागि सदैव तयार रहनु सेनाको कर्तव्य हो ।’